Abusua mu Ntɔkwa—Dɛn na Ɛde Ba?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
ƆBAA warefoɔ bi a ɔde Sarah * wɔ Ghana; waware mfe 17 ni. Ɔkaa sɛ: “Me ne me kunu Jacob taa ko sika ho.” Ɔkyerɛɛ mu sɛ, “Meyɛ nneɛma pii de boa abusua no, nanso me kunu ne me mmɔ yɛn sikasɛm ho nkɔmmɔ, enti me bo taa fu no. Yɛtumi tena fie hɔ nna pii a obiara nkasa ne yɔnko ho.”
Ne kunu Jacob nso kaa sɛ: “Ampa, ɛtɔ da a yɛn bo fu ma yɛtutu bi ma yɛn ho. Yɛntaa nte yɛn ho ase, na yɛntaa mmɔ nkɔmmɔ papa biara. Enti ɛreyɛ ara ni na yɛasɔ ntɔkwa mu. Ɛtɔ da nso a, nea ɛde ba ne sɛ yɛhaahaa yɛn ani wɔ nsɛm bi ho dodo.”
Ɔbarima bi a ɔde Nathan nso wɔ India. Nnansa yi ara na ɔreware. Ɔkaa sɛ bere bi n’ase barima teateaam guu n’asebaa so maa maame no bu fuu paa ma enti ɔtu fii fie hɔ. “Mebisaa m’ase barima nea enti a ɔyɛɛ saa, nanso asɛm no anyɛ no dɛ. Ɔfaa no sɛ makasa atia no. Afei ɔde n’anibere soɛɛ yɛn a yɛaka wɔ fie hɔ nyinaa so.”
Ebia wo nso, woahu sɛ, sɛ obi annya abotare na ɔka nsɛm a ɛyɛ ya a, ɛtumi de ntɔkwa ba abusua mu. Ɛtɔ da a, asɛm a wo ne obi reka no bɔkɔɔ no, wobɛhu ara na adane akasakasa wɔ mo ntam. Ɛwom, obiara ano tumi pa, enti ɛnyɛ den sɛ wobɛgye obi ano asi bɔne anaa wobɛdwene sɛ ɔwɔ wo ho adwemmɔne. Nanso wei nyinaa akyi, yɛbɛtumi atena ase asomdwoe ne baakoyɛ mu.
Sɛ akasakasa sɔre wɔ w’abusua mu a, dɛn na wobɛyɛ? Nneɛma bɛn na wobɛyɛ ama asomdwoe asan aba abusua mu na obiara ho atɔ no? Dɛn na mmusua nyinaa bɛtumi ayɛ ama asomdwoe atena wɔn ntam? Yɛsrɛ wo, toa akenkan no so.
^ nky. 3 Yɛasesa din no bi.